डि.भीको नतिजा आज राति आउने, आफुलाई परे नपरेको यसरी हेर्नुहोस् ! | पहिलो बोली
डि.भीको नतिजा आज राति आउने, आफुलाई परे नपरेको यसरी हेर्नुहोस् !
३९५५ पटक पढिएको
जेठ २४, काठमाडौं:
सन् २०२१ को लागि भरिएकाअमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) को नतिजा आज राति सार्वजनिक हुने भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल ट्वीट मार्फत आज जेठ २४ गते शनिबार नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेपछि डिभी नतिजा सार्वजनिक हुने जानकारी दिएको हो ।
गत मे ५ तारिकमा हुनुपर्ने डिभीको नतिजा कोरोना कहरका कारण एक महिनापछि (जुन ६) मा सारिएको थियो । दूतावासले डिभी परेको जानकारीबारे कुनै इमेल नपठाउने तथा भिसा अन्तर्वाताका लागि अग्रिम शुल्क बुझाउन पनि इमेल, चिट्ठी या अन्य अनुरोध नपठाउने दूतावासले जनाएको छ। डिभीका बिजेताहरुले सन् २०२० को अक्टोबरदेखि अमेरिकाको भिसा प्राप्त गर्न सुरु गर्नेछन् । सन् २०२१ को सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा भिसा प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ ।